EPRDF ammas teessoo paarlaamaa biyyoolessaa 546 dhuunfaachuu isaa Boordiin Filannoo ibse - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured EPRDF ammas teessoo paarlaamaa biyyoolessaa 546 dhuunfaachuu isaa Boordiin Filannoo ibse
Barcumaan 1 hafe kan hinlabsamneef filannoon hanga ammaatti waan hingeggeeffamneef
Dhaabbanni Itoophiyaa naannoo woggaa 25f bulchaa ture, Addi Worraaqsa Ummatoota Itoophiyaa (AWUI) ykn EPRDF, filannoo biyyoolessaa Caamsaa dabre keessa tasifameen moo’achuu isaa Boordiin Filannoo Biyyoolessaa ifa godhe. Akka ibsa Boordii Filannootti EPRDF filannoo kana injifachuu qofa osoo hintaane hunda xuruuree kan fudhate; injifannoo %100.
Ibsa boordii filannoo kan addeesse teessoon paarlaamaa biyyoolessaa hundi kan kufe harka EPRDFitti. Bu’aan filannoo aanaalee hundarraa wolitti qabame kan mirkaneesse EPRDF barcumaa manamaree biyyattiin qabdu 547 keessaa 546 fudhachuu isaati. Tokkichi hafe kan hafeef filannoon waan hingeggeffamneef qofa; wolitti bu’iinsa ta’ee turetu filannoon suni akka duubatti harkifatu taasise. Hangamuu turu, ammatti waahunduu ifa, sunis bakka dhaqu waan qabu hinfakkaattu.
EPRDF nimooyatama jedhee kan eege tokko hinturre. Kanaaf moo’achuun isaa kan nama hinraajneef. Filannoonuu hinturre ykn EPRDF filannoo dura moo’e jedhaa adeemsa mootummaafi siyaasa Itoophiyaa worri qeeqanis turan. Wonti xiqqoo raajii osoo namatti hinta’in hinhafin garuu, EPRDF ammas akkuma bara 2010, injifannoo %100 argadhe jechuu isaati. Taajjabdoonni heddu marsaa filannoo kanaatti EPRDF teessoo paarlaamaa hanga tokko, siyaasuma isaatiif jecha, paartilee mormitootaaf gadi lakkisuun nimala yaada jedhu qaban ture. Suni hundi osoo hintaane hafe.
Paartileen mormitootaa hundi, tokko osoo hinmilkayin, kan hafan harka duwwaadha. Bu’aa filannoo kana irraa argatan qalama fudhatanii heerruguu qaban.
Paartileen mormitootaa kanniin akka Medrekiifi Semeyawi filannoon EPRDFn saamamuu isaa ibsanii bu’aa filannoo kanaas kan hinfudhanne ta’uu isaanii labsaniiru. Adeemsi guyyaa filannoofi achi dura tures kan miseensotaafi kaadhimamtoota mormitootaa sodaachisuufi doorsisuun guutame ture jechuun mootumma irra deddeebiaa himataa turan.
SOURCEBoordi Filannoo Itoophiyaa
boordii filannoo Itoophiyaa
Previous articleIMF- Ethiopia needs more private sector investment to sustain growth
Next articleDargaggummatti qabxiilee kanniin irratti yoo hojjattan gaafa dullummaa hinseenoftan